Wasiirka Wasaaradda Caddaaladda Somaliland oo kulan xog-warraysi ah la Yeeshay masuuliyiinta u sarraysa Hay’adda UNSOM ee Somaliland - Xogside
Home WARARKA DALKA SOMALILAND Wasiirka Wasaaradda Caddaaladda Somaliland oo kulan xog-warraysi ah la Yeeshay masuuliyiinta u...
Wasiirka Wasaaradda Caddaaladda Md. Saleebaan Warsame Guuleed, ayaa shalay kulan xog-warraysi ah la yeeshay masuuliyiinta u sarraysa xafiiska Hay’adda UNSOM ku leedahay JSL.
Wasiirka oo xubnahaas ku soo dhaweeyey xafiiskiisa, waxa uu sheegay in ujeeddada kulanku daaran yahay in la iska xog-warraysto hawlaha hay’adda UNSOM qaranka u hayso ee dhinaca caddaaladda, gaar ahaan horumarinta iyo dib-u-habaynta xabsiyada.
Wasiir Saleeban waxa uu sheegay in loo baahan yahay in Wasaaradda iyo hay’addu wada yeeshaan qorshe hawleed ay ku shaqeeyaan si hawlaha hay’adda ka caawinayso bahda caddaaladda u yeeshaan midho dhal raad wax ku ool leh ka taga,
Madaxa xafiiska Somaliland ee hay’adda UNSOM, Simon Strachan, ayaa soo dhaweeyey qorshaha wasiirku soo jeediyey, isagoo sheegay in ay diyaar u yihiin in ay si bille ah u soo gudbiyaan qorshayashooda iyo waxyaabaha ay qabteen.
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Caddaaladda Cabdiraxmaan Sheekh Xasan, ayaa isna tilmaamay in kulannada noocan ah ee is xog-warraysiga ah muhiim yihiin, loona baahan yahay in la joogteeyo.
Kulankaas waxa kale oo goob joog ahaa Agaasimaha Waaxda Arrimaha Xabsiyada iyo Xuquuqda Aadamaha Ibrahim Khadar, La-taliyaha dhinaca dhaqan-celinta maxaabiista ee hay’adda UNSOM Alice iyo La-taliyaha dhanka Shuruucda ee hay’adda Mr. Nasru.
Previous articlekhatarta markii saddexaad soo noqotay ee Xanuunka Covid 19 iyo tilmaamaha lagaga Hortegi karo oo ..
Next articleWasiir kuxigeenka wasaaradda Xanaananadda Xoolaha iyo Horumarinta Kalluumaysiga ayaa saaka Xafiiskeeda ku qaabishay Wafti ka socda Xafiiska Taiwan ee Somaliland